सन्दर्भ भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस : भ्रष्टाचारविरुद्ध #MaPani अभियानलार्इ व्यापकता दिअाैँ « News24 : Premium News Channel
प्रकाशित मिति : Dec 09, 2018
काठमाडाैं । शायदै कमै हाेला नेपालमा कुनै दिवस नपरेको । कुनै दिन त धेरै दिवस जुधेकासमेत हुन्छन् । पक्कै पनि त्यस्ता दिवसले कुनै न कुनै सकारात्मक सन्देश दिने महत्वपूर्ण उद्देश्य लिएका हुन्छन् ।
आज डिसेम्बर ९ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस । सन् २००३ डिसेम्बर ९ (मङ्सिर २४ ) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भ्रष्टाचारलाई विश्वको मुख्य साझा समस्या मान्दै विश्वभर यो दिवस मनाउन शुरूवात गरेकाे थियाे । त्यसपछि विश्वभर भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाउने लहर र रहर चलेकाे छ ।
त्यहाँबाट कहिल्यै भ्रष्टाचार नगरेका गौप्राणी सन्त मनुवाहरूले यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । आजको दिन संसारभरि भ्रष्टाचारप्रतिको चेतनामा वृद्धि गराउन र जागरण बढाउने कार्यमा केन्द्रित गरिन्छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस भन्दा पनि ‘भ्रष्टाचारीहरूकाे दिवस’ भन्दा अझ अर्थपूर्ण हाेला । किनभने नेपालकाे हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार यति नराम्राेसँग झाँगिइसकेकाे छ कि भ्रष्टाचारीलार्इ कारबाही गर्दा कार्यालय नै रित्ताे हुने अभिव्यक्त स्वयं भ्रष्टाचार नियन्त्रणकाे जिम्मा अख्तियार प्रमुखले भन्ने गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस नेपालमा पनि विभन्न कार्यक्रम गरी मनाइन्छ । नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस जति मनाए पनि भ्रष्टाचार भने कहिल्यै घटेन । सन् २०१५ मा १ सय ६८ देशहरुको सर्वेक्षण हुँदा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल १ सय ३०औं नम्बरमा परेको थियो । पछिल्लाे समय नेपालकाे स्थिति अझ खस्किँदाे छ । सन् २०१५ मा नेपाल सुशासन सूचका‌ंकमा नेपालकाे २७ अंक रहेकाेमा सन् २०१७ मा अाएर नेपाल ३१ अंकमा छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नभएकाे त ठाँउ नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । सबै भन्दा बढी सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूले मनपरी पैसा लिने गरेकाे पाइन्छ । नेपाल सरकारदेखि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू हुँदै तोरीलाउरेदेखि उपरखुट्टे टाउकेसम्मका मनुवाहरूले भ्रष्टाचारहरूले समेतभ्रष्टाचार गरेकाे पाइन्छ । विकास–निर्माणका नाममा खोला नै नभएको ठाउँमा नहर र बाटो नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरेर समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । ।
पछिल्लाे समय ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा मिलाइदिएबापत घुसको आदान–प्रदान अचेल विदेशमा हुन थालेका छन्। स्वास्थ्य सेवा, भोजन, औषधोपचार, खानेपानी, सञ्चार सेवा, बाटोघाटो, वन, जंगल, जमिन, ढुंगा–बालुवाजस्ता जनताका आम आवश्यकताका क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ।
भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण भनेकाे दण्डहीनता हो। पछिल्लो समय राजनीतिक तहमा वा त्यसको आँडमा हुने गरेका भ्रष्टाचार बढी चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । कतिपय सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको मूल जरोको रूपमा राजनीतिलाई लिने गरेको समेत पाइन्छ ।
देशकै मुख्य समस्या- भ्रष्टाचार
नेपालमा विकास हुन नसक्नुकाे मुख्य कारण नै भ्रष्टाचार हाे । जताततै हुने भ्रष्टाचारकै कारण देशमा विकास हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार मुलुकमा जेलिएको मुख्य समस्याका रुपमा रहेकाे कसैबाट छिपेकाे छैन । कसैले भ्रष्टाचारीसँगै मिलेर कमाउने काम गरे भने कसैले भ्रष्टचारीलाई थर्काएर असुलेर खाए/खाइरहेछन् । जसरी पनि कमाउनेलाई वाहवाही गर्ने हाम्रो संस्कारले पनि भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ ।
अाफूलार्इ अरू भन्दा कसरी सम्पन्न देखाउने, अरूकाे बाइक हुदाँ अाफू कार चड्न इच्छा राख्ने, आफ्नो सुखलाई मात्र सुख ठान्ने, आफ्नो आँगन, घर सुकिलो र भव्य भए पुग्ने, आफ्ना सन्तानको उन्नति र भविष्य सुनिश्चित भए पुग्ने चिन्तन भएकाहरू बढी हुँदा नै भ्रष्टाचार झांगिएको हो ।
लुट्ने, ठग्ने, चोर्ने, ढाँट्ने, बेच्ने, हसुर्ने, सात पुस्तासम्मलाई पुग्ने गरी थुपार्ने र डकार्नेहरूकाे लागि भ्रष्टाचार सबै भन्दा उत्तम साधन भएकाे पाइन्छ ।
हामी भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै कति करोड वा लाख भन्ने बुझ्छौँं । कुनै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरिदिनुपर्ने नागरिकका काम समयमै नगरिदिए पनि अनियमितता हुन्छ । कार्यालयमा रहनुपर्ने समय अन्यत्र रहेर सेवा नदिए पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । काम चोर कर्मचारीदेखि भ्रष्ट आचरण भएका सबै भ्रष्टाचारी हुन्छन् । तर बिडम्बना- भ्रष्टाचारिविरुद्ध कारबाही भएको उदाहरण निकै कम छन् ।
कसरी हटाउन सकिन्छ भ्रष्टाचार ?
धेरैको भनाइ छ- भ्रष्टाचार कानुनद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन तयार गर्नुपर्छ । तर यो भनाइ केही हदसम्म ठीक देखिए पनि वास्तवमा भ्रष्टाचारलाई कानुनले मात्र पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने हामीकहाँ प्रष्ट भइसकेकाे छ ।
‘हामी चाहन्नौँ, घृणा गर्छौं’ त भनिरहेका हुन्छौं तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्छ कि देखिन्न ? नागरिक जसले सूचना पाएर पनि भ्रष्टाचारको सूचना बाहिर ल्याउन सहयोग गर्दैन त्यो असल शासनको हिमायती हुनै सक्दैन । हामीले नागरिकका तर्फबाट गर्नुपर्ने अनुगमन गर्ने, सूचना बाहिर ल्याउने वा विरुद्धमा आवाज नउठाएसम्म न त अनियमितता अन्त्य हुन्छ न हामीले समाज बदल्नै सक्छौँ ।
पछिल्लो दशकहरूमा संसारभरि भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न अभियानहरू प्रायः असफल भएको पाइन्छ । विशेषत: नेपालजस्ता विकासउन्मुख राष्ट्रहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम, नीति योजना ल्याउन सकिएकाे छैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध #MaPani अभियान
केही समयअघि पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एउटा लेख लेख्दै नेपालामा अब भ्रष्टाचारविरुद्ध मपनि (ह्यासट्याग मिटु) अभियान चाहिन्छ भनेर लेख्नुभएकाे थियाे । जसरी अमेरिकाबाट सुरु भएको महिला हिंसाविरुद्धको ‘मि टु’ अभियानले अहिले संसारभर नयाँ आन्दोलन छेडेको छ, त्यसैगरी नेपालमा अब भ्रष्टाचारविरुद्धकाे #MaPani अभियानलार्इ तीव्रता दिनकाे अाजकाे अावश्यकता हाे । अहिले फेसबुकमा याे अभियानकाे सुरुअात पनि भइरहेकाे छ ।
सन् २००६ बाट सुरु ‘मि टू’ अर्थात् ‘म पनि’ अभियानले यौनहिंसा प्रभावितलाई सहानुभूतिसाथ सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सन् २०१७ मा अर्की अमेरिकी कलाकार आलिसा मिलानोले यो अभियानलाई ‘ह्यासट्याग मिटू’ (#मिटू) मा रूपान्तरण गरिन्। यो छोटो समयमै भाइरल भयो। त्यसैगरी नै हामीले भ्रष्टाचारमा पनि ‘मि टु’ आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने भएको छ।
पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भन्नुभएजस्तै भ्रष्टाचार राष्ट्रघाती अपराध हो र यसले राष्ट्रलाई डुबाउँछ । कोही कसैले बाध्यताले घुस दिएको छ भने सबैसामु केकति कारणले कसलाई कहिले कति रकम दिएको हो उल्लेख गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीकाे एक सूत्रीय प्रयास भनेको नाजायज रकम संकलन गर्नु हो । त्यसैले घुस मागेर घुस दिएको घटना अब लुकाउनु हुँदैन ।
भ्रष्टाचारबाट आफैलाई बचाउन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अवाज मजबुत र प्रभावकारी बनाउन भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैको सहकार्य जरुरी छ । हुन त धेरैले बाध्यताले गर्दा घुस दिएकाे पाइन्छ । कति चाहिँ अरू भन्दा छिटाे र कामकाे झन्झट झेल्नु नसकेर घुस दिने गरेका छन् । तर जसले जहाँ जुन बाध्यताले घुस दिइएकाे हाे साे काे सामाजिक सञ्जालबाट पाेल खाेल्दै जाने हाे भने समाजका सामु भ्रष्टाचारीहरु नांगिनेछन् ।
तसर्थ अब नेपालमा हामी सबैले जनस्तरबाटै #MaPani अभियान सुरु गरेर भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । यसले गर्दा समाजमा भ्रष्टाचारीकाे नैतिक बल कमजाेर हुने र उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने संस्कारकाे विकास हुने देखिन्छ । अन्यथा हामीले समयमै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउन नसक्ने हो भने निश्चित छ, भ्रष्टाचार झनै मैलाउँदै जाने छ । भ्रष्टाचार आर्थिक चलखेल र अनियमितता मात्र नभई नीति नियम विपरित हुने सबै किसिमका कार्यले भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने हुनाले यसमा सुधार ल्याउनको लागि जिम्मेवार तहमा सबैमा इमान र नैतिक पक्षको विकास गराउन जरुरी छ । अब याे अभियानलार्इ व्यापकता दिन ढिला नगराैँ ।
त्रिपुरेश्वर रजिस्टार कार्यालयकी सहायक रजिस्टार पन्थी घुससहित पक्राउ
वाइडबडी खरिद प्रकरण : मन्त्री अधिकारीले अर्को झुट बोलेको खुलासा